(दुई वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा महिला प्रहरी जवान सुन्तली धामीलाई कार्यालयमै पुरुष सहकर्मीबाट यौन दुव्र्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि धामीलाई न्याय दिलाउन निभाएको भूमिकाका कारण तत्कालीन सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पार्वती थापा राष्ट्रिय रुपमै चर्चित हुनुभयो । उनै डिआइजी थापा हाल मध्यपश्चिम प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत
नेपाल प्रहरीमा हाल उहाँ लगयत दुई जना मात्र महिला डिआइजी कार्यरत छन् ।बुवा सनक बहादुर थापा र आमा खेत कुमारी थापाको सन्तानको रुपमा २०१६ साल फागुन ४ गते गोरखा बजारमा जन्मनु भएका थापा २०४० साल बैशाख १ गते प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बाट नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नु भएको हो । श्रीमती थापा त्यसको लगत्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षकमा पदोन्नति हुनु भएको थियो ।
श्रीमान, एक छोरा र एक छोरीका धनी श्रीमती थापा २०४९ सालमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी), २०५८ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), २०६३ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदै श्रीमती थापा २०६५ सालमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा हुनु भएको हो । मध्यपश्चिम क्षेत्रको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था बारे गोविन्द शर्माले लिएको अन्तरवार्ता सुरक्षा सन्दर्भमा समसामयिक भएकोले नेपालगन्ज दैनिकबाट साभार गरिएकोछ –सं)
मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सशस्त्र समूहको सक्रियता छ, अन्य क्षेत्रभन्दा यहाँ केही फरक पाउनु भएको छ ?
सशस्त्र भूमिगत समूहको सकृयताको कुरा गर्नुपर्दा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र नेपाल–भारत सीमासंग जोडिएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र
भारतसंगको खुल्ला सीमा भएको कारण अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुग्न जानु स्वाभाविक हो । खुल्ला सीमाबाट उनीहरु (सशस्त्र भूमिगत समूहहरुले पनि गोप्य आवत जावत गर्न सक्छन् । यसतर्फ हामी सचेत छौं ।
सशस्त्र समूहका गतिविधि त अहिले पनि जारी छन् । के यी समूह चुनौतीका रुपमा छन् ?
बाँके र बर्दियामा सशस्त्र समूहका जिल्ला इञ्चार्ज सहित थुप्रै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न सफल भएका छौं ।
तर पनि नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा विष्फोटनका घटना भएका छन् नि त ?
यी घटना सामान्य हुन् । ससाना पटाकाहरु आम नागरिकलाई तर्साउन पड्काइएको पाइएको छ । यसैगरी तर्साउन बम राखेको पाइएकोछ । समग्रमा पछिल्लो समय सशस्त्र समूहका गतिविधि निस्तेज पारेकाछौं ।
मध्यपश्चिम क्षेत्र विगत सशस्त्र समूहबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हो । त्यसको असर अहिले कति छ ?
भौतिक साधन स्रोतको अभावको सामना अहिले पनि गर्नु परेको छ । द्वन्द्व कालमा यस क्षेत्रमा क्षति भएका मध्ये १४९ को अझै पनि पुनः निर्माण गर्न बा“की छ । अहिले पनि १७१ प्रहरी इकाई भाडामा छन् । २९ वटा अन्य कार्यालयमा बसेका छन् । कतिपय स्थानमा घरजग्गा नभए पनि प्रहरी परिचालन गर्नु परेको छ ।
क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरु वीच कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा कहिलेका“ही अन्तरद्वन्द्व चलेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
अन्तरद्वन्द्व भनेको कस्तो हो भने, कानुनले दिएको अधिकार अनुसार कामकारवाही गर्ने हो । त्यसमा अरु मातहतकाले कसरी हेर्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । कहिले काँही कडिकडाउ गरियो भने कसैलाई मन नपर्न सक्छ । कसैलाई मेरो व्यवहारका बारेमा मन नपरेको हुन सक्छ । मेरो कामकार्यवाहीमा चित्त बुझ्दैन भने मलाई कन्भिन्स गराउनु होस् भन्ने गरेको छु । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी
छैन । मलाई कसैले भनेको छैन । बाहिर हल्ला हुँदैमा हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन ।